Xinhua Myanmar - ဂီနီနိုင်ငံတွင် အီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုအသစ် ဖြစ်ပွားပြီး လူ ၃ ဦးသေဆုံးကြောင်း အာဖရိက CDC ထုတ်ပြန်
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီမြို့တွင် မြောင်လူမှုအသိုက်အဝန်းအား COVID-19 ရောဂါအတွက် nucleic အက်စစ် စစ်ဆေးပေးသည့် နေရာတစ်ခု၌ ကျန်းမာရေးလုပ်သားတစ်ဦးက ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေစဉ်(ဆင်ဟွာ) Africa & Middle East
အက်ဒစ်အက်ဘာဘာ ၊ ဧပြီ ၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အာဖရိကတိုက်အနောက်ပိုင်းရှိ ဂီနီနိုင်ငံတွင် ပြီးခဲ့သော ရက်သတ္တပတ်က အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ ၅ ဦးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ယင်းရောဂါနှင့်ဆက်စပ်၍ သေဆုံးသူ ၃ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း အာဖရိကတိုက်ကူးစက်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး နှင့် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးစင်တာ (Africa CDC) က ဧပြီ ၆ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
အာဖရိကသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၅ နိုင်ငံအတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုလုပ်ပေးနေသော အဖွဲ့အစည်းကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် အာဖရိက CDC စင်တာက အီဘိုလာရောဂါ လူနာသစ် ၅ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းနှင့်အတူ အာဖရိကတိုက်တွင် ယင်းရောဂါ ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၃၅,၁၈၀ ဦးထိ ရှိလာပြီး သေဆုံးမှုလည်း များစွာရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။
“ ဂီနီနိုင်ငံမှာ အီဘိုလာကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၂၃ ဦးရှိပြီး အဲဒီထဲက ၁၂ ဦးသေဆုံးသွားတယ် ၊ အခြား ၉ ယောက်ကတော့ ပြန်ကောင်းသွားတယ် ” ဟု အာဖရိက CDC ကဆိုသည်။
“ ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံမှာတော့ အီဘိုလာကူးစက်ခံရသူ ၁၂ ဦးရှိပြီး ၆ ဦးသေဆုံးသွားတယ် အခြား လူနာ ၆ ဦးကတော့ ပြန်ပြီးသက်သာသွားပါပြီ” ဟု အာဖရိက CDC ကဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
ယခုကဲ့သို့ အာဖရိက နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံတွင် အီဘိုလာရောဂါ တစ်ကြော့ပြန် ကူးစက်မှုအသစ် ပေါ်ပေါက်လာခြင်းသည် အာဖရိကတိုက်အတွက် COVID-19 ကပ်ရောဂါနှင့်အတူ စိတ်သောကသစ်များ ထပ်မံပေးပို့လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်း အနောက်အာဖရိကတွင် အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုကြောင့် လူပေါင်း ၂၈,၆၀၀ ရောဂါဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁၁,၃၀၀ ဦး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အီဘိုလာရောဂါသည် ဖျားခြင်း ၊ ပျို့အန်ခြင်း ၊ ဝမ်းလျောခြင်း ၊ ခန္ဓာကိုယ်နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်း သို့မဟုတ် ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်ခြင်း စသည့် လက္ခဏာများအပါအဝင် အရေပြားပေါ် အကွက်များထကာ အဖျားကြီးတက်ကြောင်း နှင့် ကိုယ်တွင်းပြင်ပ သွေးယိုစိမ့်ခြင်းများလည်း ဖြစ်တက်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
ADDIS ABABA, April7(Xinhua) -- The west African country of Guinea has detected five Ebola virus cases and three Ebola-related deaths over the past one week, the Africa Centers for Disease Control and Prevention (Africa CDC) said Tuesday.
Ebola isahighly contagious hemorrhagic fever that causesarange of symptoms including fever, vomiting, diarrhea, generalized pain or malaise and in many cases internal and external bleeding. Enditem
file Photo: Health workers carry out the body ofapatient with unconfirmed Ebola virus on Aug. 22, 2018 in Mangina, near Beni, in the North Kivu province. (Xinhua/AFP)
Previous Article ပင်လယ်နီ၌ အီရန်နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးသင်္ဘောပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွါးကြောင်း အီရန်အတည်ပြု
Next Article မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် လိုက်ဘေးရီးယား အကျဉ်းထောင်မှ အကျဉ်းသား ၉၀ ဦး ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်
COVID-19 ရောဂါစိုးရိမ်မှုကြောင့် တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲသို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံ ဆုံးဖြတ်
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ဧပြီ ၁၂ ရက်တွင် lockdown ပိတ်ဆို့မှုပယ်ဖျက်ပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်အတည်ပြု
ထိုင်းနိုင်ငံ၌ အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှု မျိုးစုံနှင့်အတူ COVID-19 လူနာသစ် မြင့်တက်လာ